Tsy hiverina hampianatra ny mpampianatra… | NewsMada
Tsy hiverina hampianatra ny mpampianatra…
Vita tanteraka ny fanadinana rehetra ! Mitohy kosa ny fitakian’ny mpampianatra Fram sy ny mpanabe mpiasam-panjakana. Nanatitra ny fehin-kevitra iraisan’ny sendikàn’ny mpampianatra rehetra ny solontena teny amin’ny andrim-panjakana misy rehetra eto amintsika. Nahazo ny anjarany avokoa ny filoha, ny depiote, ny senatera, ny praiminisitra…
« Miandry ny valin-teny avy amin’ny mpitondra izy ireo mandra-pahatongan’ny andro hiverenan’ny fampianarana indray ny 3 oktobra izao », hoy ny fanazavan’ny filohan’ny fikambanana Aneffa, Randrianjafy Elidio, omaly. Efa nahavita ny fanamby tamin’ny ray aman-dreny sy ny mpiadina amin’ny fanadinana ny mpampianatra ka fotoana izao hamitan’ny minisitera ny anjarany izy ireo.
Rehefa tsy hamaly ny fangatahana ao amin’ny fehin-kevitra ny fanjakana, tsy handray ny asany ny mpampianatra rehetra. 1% monja amin’ny fitakiana no nahazo valiny nefa mbola tsy mahafa-po indray. 100 000 Ar ny indemnité pour le personnel enseignant nangatahana nefa 10 000 Ar no azo. « Amin’ny taona 2017 vao hotafiditra amin’ny karaman’ny mpampianatra izany sorabola izany », hoy ny nambarany ihany.
Nisy ny fihaonana tamin’ny minisitry ny Fanabeazam-pirenena nialoha ny fanadinana, nanambara izy fa tsy miankina amin’ny minisitera iandraiketany ny fitakiana satria resa-bola avokoa. Mitodika amin’ny minisiteran’ny Fitantanam-bola ny mason’ny mpampianatra rehetra.
Momba ny fandoavana ny karaman’ny mpampianatra Fram, miandry ny roa volana mey sy jona ny mpanabe misitraka ny fanampiana. Mitaky ny handoavana izany ho isam-bolana nefa tsy ahena ny sorabola, ny mpampianatra satria sarotra ny fiainana. Ny mpampianatra amin’ny CEG sy préscolaire, herintaona maninjitra tsy naharay ny fanampin-karama.